vendredi, 05 mars 2021 09:34
Fankalazana ny fetin'ny vehivavy : Manohana ireo vehivavy manana fahasembanana ny FITIA
Notokanana ny alakamisy 04 mars tetsy amin’ny Cenam 67ha ny ivon-toerana Har 'Kanto tamin’ny alalan’ny fikambanana FITIA, izay toerana handraisana ireo mpanao asa tanana rehetra sy ireo mpanao asa tanana manana fahasembanana, hahafahana mandalina bebe kokoa ny tontolon’ny asa-tanana. “Ny vehivavy rehetra dia afaka mampiroborobo hatrany, eny fa na dia ny vehivavy manana fahasembanana aza” hoy ny minisitry ny fampianarana teknika sy ny asa an-tsekoly. Nanolotra fitaovana hoan’ireo mpisehatra ao amin’ity ivon-toerana ity ny fikambanana FITIA. Ankoatr’ireo dia vehivavy manana fahasembana miisa 20 no nahazo fampiofanana maimaimpoana momba ny mofomamy sy nahandro.
Nankalazaina androany tetsy amin'ny tokotanin'ny ORTM Anosy ny andro maneran-tany ho an'ny RADIO. Mankalaza ny faha-folo taona isika eto Madagasikara raha 110 taona kosa no nisian'izany maneran-tany. Tafiditra ao anatin'ny fialamboly, fanentanana, kolontsaina toy ny hira , dokam-barotra, finoana, ny fanatanjahantena sy ny maro hafa ny fanamarihana ny anjara-toeran'ny onjampeo manerantany. (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 23 janvier 2021 09:28
Finoana : Nodimandry tao antranon'Andriamanitra i mopera Rabenarivo Rolland aumonier HJRA
Nandritra ny fiaraha-mivavaka Firaisampinoana tao amin'ny Lasapely Katolika Saint Luc Famindrampo an'Andriamanitra Befelatanana ny alakamisy 21 janoary 2021, dia nitambotsitra i mopera Rabenarivo Rolland, S.J. Aumonier n'ny hopitaly HJRA. Nanao ny vavaka Firaisampinoana izy, ary anjarany ny nanao Ranombavaka, izay tokony ho fohy, fa somary lava ihany ny vavaka nataony, ary dia nofaranany tamin'ny vavaka fifonana, ary ny teniny farany dia hoe "TOMPO O" dia nitambotsitra izy ary niala ny ainy.
dimanche, 17 janvier 2021 14:54
Diosezy Antsirabe : Tontosa ny noely sy taom-baovaon’ny sembana
Toy ny fanao isan-taona dia nanantateraka Noely sy Taom-baovao ho an’ny olona manana fahasembanana ny Diosezin’Antsirabe sy ny fikambanana “Fitiavana an’i Vakinankaratra”. Nisy ny lamesa notarihin’ny Evekan’Antsirabe, Mgr Philippe Ranaivomanana. Narahina fizarana fanomezana ho an’ireo olona manana fahasembanana izany, ary nofaranana amin’ny fiaraha-misakafo. Teny Antsahasoa moa no nanaovana ny hetsika ka olona manana fahasembanana nanodidina ny 2 000 no nisitraka izany. Akoho 500 kilao sy vary 14 gono no nifampizarana. Tsy nanavahana finoana moa ity hetsika ity, na ny Katolika aza no tompomarika amin’izany. Saika fanomezana avy amin’ny tsara sitrapo moa no nifampizarana tamin’ireto olona manana fahasembanana ireto raha ny fanazavana nentin’ny mompera Ramaroson Gérard, mpiahy ny fikambanana. (Jereo Sary Tohiny)
Les dirigeants du Conseil œcuménique des Églises Chrétiennes de Madagascar (FFKM), conduits par son président en exercice, Monseigneur Odon Marie Razanakolona, sont venus présenter leurs vœux de nouvel an au Président de la République Andry Rajoelina et son épouse Mialy Rajoelina, au Palais d’Iavoloha ce 8 janvier 2021. Les représentants du FFKM ont notamment évoqué les épreuves qu'a traversé le pays durant l'année passée. Outre les vœux, ils ont aussi donné leur bénédiction au couple présidentiel pour qu'ils puissent mener à bien leurs missions pour le développement du pays.
Tra-pahavoazana ny FJKM Mahatsinjo Fanantenana Sinodamparitany Mandridrano Mpiambina, ao amin’ny Kaominina Soavinandriana Itasy. Nianjera ny 27 desambra 2020 teo ny rindrin’ny Fiangonana vokatry ny rivotra nifofo mafy sy ny orana nikija nentin’ny rivodoza Chalane, ary simba hatraminy tafo. Marihina fa ho fankalazana ny faha 150 taonan’ny Fiangonana dia fanitarana ny trano Fiangonana no tsangambato nokasaina, efa maro ny ezaka nataon'ireo mpino nanomboka tamin’ny fototra sy nanangana ny rindrina nefa dia izao nianjera izao izay voatsangana. Manao Antso avo amin’ireo izay malala-tanana na mpitondra fanjakana na olon-tsotra izay afaka hanome anjara biriky hiaraka hanorina indray izay efa natsangana ny FJKM Mahatsinjo Fanantenana. (Jereo Sary Tohiny)
Le Président de la République Andry Rajoelina, accompagné de son épouse Mialy Rajoelina et de ses trois enfants, ont célébré la traditionnelle messe de Noël officiée par le Père Pédro Opeka au village Akamasoa. En ces temps de fêtes, le Président de la République n'a pas manqué de rappeler que la fête de la nativité est surtout synonyme de partage et de l'entraide. Dans cet esprit, le Président Andry Rajoelina et sa famille n'ont pas oublié les enfants du Toby Akamasoa, et leurs ont offert des jouets ainsi que des friandises.
jeudi, 24 décembre 2020 19:05
Hafatra Krismasy 2020
Hafatra Krismasy 2020Mgr Odon Razanakolona, Arsevekan'Antananarivo sady filohan'ny FFKM Ho antsika mpianakavin’ny finoana rehetra, Tonga indray ity ny andron’ny Noely, hankalazantsika ny nahaterahan’i Kristy. Fety miavaka izany ho an’ny mpino Kristianina rehetra maneran-tany, ary tsy ho diso anjara amin’izany isika Malagasy. Firavoravoana, fifaliana, fifankatiavana, fa indrindra firaisan-kina no tena hanamarihana izany fankalazana izany ao anatin’ny fivavahana. Izao fetin'ny Noely izao ihany koa dia manamarika ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Natolony ho antsika ny Zanany Lahy tokana mba ho famonjena antsika. Hanaisotra ireo ota maroben’ny zanak’olombelona. Izany no taratry ny famindrampon’Andriamanitra amintsika, ka ho Azy ny dera sy ny laza amin’ny fotoana rehetra, indrindra ny toy izao. Ny Noely dia manambara amintsika fa ny fampianarana ny fampiraisana dia avy amin'i Kristy. Ny fiombonantsika Kristianina mpiara-mivavaka dia tena avy amin’i Kristy.
jeudi, 24 décembre 2020 18:43
Lapa Manjakamiadana : Nahemotra ny fisokafany ho an'ny daholobe
Ny 6 novambra 2020 no efa nambara fa hisokatra ho azon’ny besinimaro tsidihina mialohan’ny Noely ny Mozea ao Anatirova. Nahemotra izany. Raha ny fanazavan’ny Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina Lalatiana Andriatongarivo dia noho ny fahazoana sy ny fahatongavan’ireo harem-bakoka nampodiana avy any Londres taorian’ny lavanty nahazoan’ny fitondram-panjakana azy ireo, sy noho ny lamina amin’ny fampirantiana azy ireo sy ny fampanamboarana ny toerana ahafahana mampiranty azy izay mila manaraka ny fenitra iraisam-pirenena amin’ny mozea no antony nanemorana herinandro vitsivitsy izany fisokafana izany.
Matetika ny mpanao gazety dia tafiditra anaty sakoroka, na anaty ady, anaty lozam-pifamoivoizana, fitsaram-bahoaka... Mipetraka ny fanontaniana, ny asa fampitam-baovao ve no mandeha aloha, sa hiditra ao anatin'ilay toe-draharaha izy, anasaraka olona miady, hanavotra olona safotra, na hitondra olona any amin'ny hopitaly, sa hampiteraka ilay vehivavy anaty fiara karetsaka, hamonjy ilay maratra, sa hisitaka amin'ilay toe-draharaha, ka hanao ny asa fanaovan-gazety hitatitra izay zava-misy natrehany. Ny reporteur de guerre ireny moa dia tratran'izay toe-javatra izay ihany koa, izy mahafantatra ny firoson'ny adversaire n'ilay iray, hilaza amin'ilay mpifanandrina ve izy fa efa ambadika amono azy ao ireo fahavalony, sa angina izy ka hanokatra ny camera satria fantany fa hisy fifanjevoana eo. Tsy mora ny asa fanaovan-gazety, satria tsy afaka miala amin'ny fiaraha-monina izy, nefa koa tsy tokony tafaringotra anatin'ilay toe-draharaha ka lasa acteur actif, fa tsy reporteur passif. Miankina amin'ny zava-misy hatrany, fa ny reporteur photographe matetika, vao misy ny toe-draharaha dia ny cam na ny appareil photo no mitselatra voalohany, dia arakaraky ny zava-misy vao miditra izy. Mirary soa e.Patrick